Wefti Kenya Ah Oo Ku Wajahan Somaliland | Hangool News
Wefti Kenya Ah Oo Ku Wajahan Somaliland
May 16, 2019 - Written by Hangool News 1
Wefti balaadhan oo ka socda baarlamaanka dalka Kenya ayaa la filaya in ay galinka dambe ee Khamiista soo gaadhaan magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Weftiga ayaa ka qayb galaya dabaal degga xuska maalinta Qaran ee 18 May.
Warbaahinta Somalilanchronicle oo soo xiganayso xog ay ka heshay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in weftigani ka socdo guddiyo kala duwan oo baarlamaanka Kenya ah kuwaas oo ay ka mid yihiin guddiyada arrimaha dibadda, difaaca, tamarta, maalgashiga iyo kuwo kale.
Weftiga xildhibaannada ah ayaa la kulmi doona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa.
Muddooyinkii u dambeeyay waxa kor u kacay xidhiidhka Somaliland iyo Kenya waxaanay dhawaan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya bilawday qabanqaabinta wakiil u fadhiyi doona Hargeysa.
Ma cadda in ay Kenya u soo dhawaysanayso Somaliland xidhiidhka ay la lahayd Soomaaliya ee xumaaday iyo in kale waxaana guuldarraystay isu soo dhawayn uu bilaabay ra’isal wasaare Abiy Axmed oo Nairobi ku kulansiiyay Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta.